China Rimsulfuron A Sulfonylurea ပေါင်းသတ်ဆေးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Senton
Rimsulfuron တစ် ဦး က Sulfonylurea ပေါင်းသတ်ဆေး
CAS အမှတ် 122931-48-0
မဂ္ဂါဝပ် 431.4ဂရမ် / mol
Vဖိအား apour ၁.၅×10-6Pa（25° C）
ထုပ်ပိုး: 25KG / ဗုံ, သို့မဟုတ် Custimised လိုအပ်ချက်အဖြစ်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား: 1000 တန်ချိန် / တစ်နှစ်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ လေ
Rimsulfuron ဟုတ်တယ် အေးသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အော်ဂဲနစ်အနိမ့်အမြင့်များတွင်အများဆုံးကျန်ရှိသောလှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်, ဘာလဲ အဖြူ ပုံဆောင်ခဲ အမှုန့်. ရှိပါတယ် စိုက်ပျိုးချိန်အထိသန့်ရှင်းသောလယ်မြေများကိုထိန်းသိမ်းရန်မြေဆီလွှာအလုံအလောက်ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်သည် နှစ်ပတ်လည်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် သို့မဟုတ်နှစ်ရှည် gramineae နှင့်ပြောင်းဖူးလယ်ပြင်၌ကျယ်ပြန့် - ပေါင်းပင်။အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်သီးနှံများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော်လည်းပြောင်းဖူး၊ စေးကပ်သောပြောင်းနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကိုမသင့်တော်ပါ။ဒါဟာပြောင်းဖူးကိုလုံခြုံသည်,အထူးသဖြင့်နွေ ဦး ပြောင်းဖူးရန်။အဲဒီမှာရှိပါတယ် နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုအဆိပ်မဖြစ်စေပါနှင့်မသက်ရောက်ပါဘူး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Hebei Senton သည် Shijiazhuang ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ကျနော်တို့တင်ပို့အတွက်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုအလယ်အလတ်,Synergist ကုန်းနှီး,ဖော့စဖရပ်အလွှာ Crystalls,Methomyl သည် Hydroxylammonium ကလိုရိုက် ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
Isoleucine ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအားဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဟန့်တားသောစံပြကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Leucine Valine အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရည်အသွေးများဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကတရုတ်မူလအစဆဲလ်ဌာနနှင့်စက်ရုံကြီးထွားမှု၏စက်ရုံ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ အရည်ပိုးသတ်ဆေး Propyl dihydrojasmonate
နောက်တစ်ခု: Permethrin သည်ထိရောက်မှုရှိသောအင်းဆက်ပိုးများကိုသတ်သည်
အရည်အသွေးမြင့်စိုက်ပျိုးရေးပေါင်းသတ်ဆေး Bispyribac -...
White Crystalline အမှုန့် Rimsulfuron
စနစ်တကျ Post ကိုအရေးပေါ်ပေါင်းသတ်ဆေး
Bispyribac ဆိုဒီယမ်တစ် ဦး ကစနစ်တကျပေါင်းသတ်ဆေး
Thr အသုံးများသောပေါင်းသတ်ဆေး Bispyribac ဆိုဒီယမ်